ओली प्रचण्डको ३ घण्टा बसाइले मन मात्रै माझियो, नेकपा फेरी फुट्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न चाँही उब्जियो – HostKhabar ::
ओली प्रचण्डको ३ घण्टा बसाइले मन मात्रै माझियो, नेकपा फेरी फुट्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न चाँही उब्जियो
by रामकृष्ण अधिकारी
अन्नपूर्णपोष्ट /काठमाडौं : शीर्ष नेताहरूको कटुतासँगै नेकपाका कार्यकर्तामाझ एउटा चिन्ता गढेको छ– कतै एकता भत्किने त होइन ? नेकपा फेरि फुट्ने त होइन ?
मेलमिलापको अपेक्षासहित दुई अध्यक्ष एक–एक विश्वासपात्रसहित शुक्रबार तीन घण्टा बसे। जति बसाइ लम्बिँदै गयो, शुभेच्छुकको आशा बढ्दै गयो। तर, छुटुन्जेलमा मन त माझियो। कुरा बाझिएरै रह्यो।
दाहालले पार्टीभित्र उठेका विषयमा छलफल नगर्ने भन्न नसुहाउने भन्दै एकता जोगाई राख्नुपर्ने र पार्टीको निर्णयलाई सबैले मानेर जाने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि ओलीले दाहालसँग भने, ‘पार्टी एकता सकेसम्म गर्ने हो। तर पार्टी अहिले फुटे बराबर छ। तपाईंले भोलि कारबाही गर्नुस्, त्यसपछि म अर्को पार्टी बनाउँछु।’
त्यति मात्र होइन, दाहाललाई ओलीले शुक्रबारको छलफलमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल वा आफ्नो टिममध्ये कुनमा बस्ने रोज्नसमेत आग्रह गरेका थिए। ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले पार्टी एकता कायम गर्ने हो भने अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कुरा भएन, अर्को एउटा पनि निर्णय गर्नुहोस् तपाईंले मेरो टिममा बस्ने हो कि माधव नेपालको टिममा बस्ने हो रु फैसला गर्नुहोस्सम्म मलाई भन्नुभयो’, ओलीले आफूलाई राखेको प्रस्ताव सुनाउँदै दाहालले ब्रिफिङमा भने।
दाहालले भने पार्टीको निर्णयलाई मानेर जानुपर्नेमै ओलीलाई जोडबल गरेका थिए। ‘एकीकृत पार्टी भइसकेपछि कहाँ त्यस्तो हुन्छ रु तपाईं (प्रधानमन्त्री) ले त्यागको कुनै भावना नै देखाउनु भएन, यस्तो पनि हुन्छ रु ’ दाहालको यस्तो प्रश्नपछि ओलीले भने, ‘मैले गल्ती गर्दिनँ।’
२ जेठ २०७५ मा ओली र दाहालबीच भएको लिखित पाँचबुँदे सम्झौतामा अढाई वर्षपछि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख भएको विषयमा विवाद बढेपछि विवाद मिलाउन २०७६ मंसिर ४ मा अर्को समझदारी भएको थियो। त्यसमा दाहाललाई दल र ओलीलाई पाँच वर्ष नै सरकार सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको थियो। तर पनि नेकपाभित्र ओली दाहाल संघर्ष रोकिएन। त्यो अहिले बढेर उत्र्कषमा पुगेको छ।
पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि शुक्रबार एक दिनका लागि स्थायी समिति रोकेर नेताहरू सहमतिको मिलनबिन्दु खोजीमा जुटेका थिए। दुई अध्यक्ष मात्र होइन, दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि शुक्रबार दिनभर एकअर्को पक्षबीच छरिएरसमेत ‘साइडलाइन’ छलफलमा बसेका थिए।
पार्टीभित्र देखा परेको विवादलाई पूर्णविराम लगाउने उपायको खोजीमा शुक्रबार दोस्रो पुस्ताका नेताहरू ताते पनि उनीहरूले पनि सहमति फेला पार्न सकेका छैनन्। अध्यक्षकै तहमा चर्को असमझदारीपछि करिब एकतामै ब्रेक लाग्ने देखेपछि एकता भत्काउन नदिन दोस्रो तहका नेताहरू जुर्मुराएका थिए। शुक्रबार बिहान कृषिमन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालको पुल्चोकस्थित निवासमा ओली, दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल तीनै पक्षका नेताहरू जुटेर छलफल गरेका थिए।
उता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपाभित्रको विवादमा चासो देखाउँदै नेताहरूलाई सहमतिका लागि आग्रह गरिरहेकी छन्। उनले शुक्रबार बिहान उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग भेट गरी छलफल गरेकी थिइन्। त्यस्तै, नेकपाका युवा केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी विवादमा उपयुक्त विकल्पसहित समाधान खोज्न माग गर्दै धर्ना दिएका थिए। नेताहरू जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजय पौडेल, ठाकुर गैरे, हिमाल शर्मा, रामकुमारी झाँक्री, दिलुकमारी पन्तलगायत नेताले पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नुपर्ने, विधि प्रक्रियाबाट समाधान निकाल्नुपर्ने भन्दै दिउँसो तीन घण्टा धर्ना दिएका थिए। पत्रकार रामकृष्ण अधिकारीले लेखेको यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छापिएको छ ।